Propolis | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Ojiji nke ndu propolis na ọrịa dị iche iche
Anụ na-emepụta ọ bụghị naanị na mmanụ aṅụ, kamakwa ngwaahịa bara uru dị ka propolis. Propolis bụ ihe na-acha odo odo na agba aja aja. Na ya, aṅụ na-eme ka anụ ahụ dị ndụ, na-ekpochapụ mmanụ aṅụ, na-ejupụta n'olulu ndị na-enweghị isi na hives. Site n'enyemaka nke ngwá ọrụ pụrụ iche, ndị na-aṅụ aṅụ na-anakọta propolis site n'elu honeycombs na mgbidi hives.
Esi kwadebe ma tinye mmanya na-aba n'anya
Otú ọ dị, a na-eji tincture nke propolis tinyere mmanya na-aba n'anya n'ọtụtụ ebe, iji gosipụta uru bara uru nke propolis, tincture ahụ ga-abụ nke a kwadebere n'ụzọ kwesịrị ekwesị, ma werekwa ya n'ụzọ ziri ezi. N'okpuru ebe a, anyị ga-ele anya otú ị ga - esi mee ka ịṅụ mmanya na - aba n'anya, mgbe ị nwere ike iburu ya, na mgbe ọgwụ a nwere ike ibute nsogbu.
Uru nke mmiri ara ehi na propolis
Ngwa ọka na-egosipụtakarị na ha nwere ike ịgwọ ọrịa n'ụzọ ọrụ ebube tinyere ihe ndị na-emepụta ọgwụ na-eme n'oge a na-enyere mmadụ aka iwepu ọtụtụ ọrịa. Otu n'ime ụzọ apitherapy nke enwere ike ịmara maka ọtụtụ narị afọ bụ iji propolis. Ha mụtara iji ya mee ihe na mmiri na mmiri siri ike, ha na-akwadebe ya na mmiri ara ehi na-edozi ya.
Ihe mmanu uloopathic nke dabeere na propolis: utịp ọgwụgwọ na iji
Ebe ọ bụ na ndị mmadụ amụtala aṅụ aṅụ, a malitela iji ọgwụ ndị e ji eme ihe na-abaghị uru nke ụmụ ahụhụ ndị a bara uru. Na oge a, apitherapy (sitere na Grik. "Apis" - ahia) na-ejikwa ya na nkà mmụta ọgwụ. Isiokwu a ga-atụle otu n'ime ihe ndị dị oké ọnụ ahịa - propolis, mmetụta ya n'ahụ mmadụ, nkwenye maka iji ya eme ihe, yana nkwadebe ndị e mere na ya.
Bee propolis: ihe bara uru, ihe na-enyere aka, esi ewe propolis na ngwaahịa dabere na ya
A na-eji ọgwụ ndị dị iche iche eme ihe na-agwọ ọrịa dị iche iche maka ihe karịrị otu narị afọ. Otu n'ime ngwaahịa ndị a bụ propolis, bụ nke na-adịghị mma n'anya, ma nwee ọtụtụ ihe bara uru. Tụlee ihe ndị ọzọ gbasara ya na otu esi eme ya. Kedu ihe bụ propolis Propolis, ma ọ bụ, dịka a na-akpọ ya, maza ma ọ bụ bee glu, bụ ngwaahịa nke ịkpa aṅụ.
Propolis na mmanụ aṅụ: ihe bara uru, ihe na-emeso, esi eme, ebe ịchekwa
A maara ụmụ mmadụ mmanụ aṅụ kemgbe oge ochie. Akụkọ ya na-alaghachi ọtụtụ puku afọ. Otu ihe a na-emetụtakwa ngwaahịa anụ ọhịa niile. Ndị mmadụ achọtala mgbe niile maka ha. Ngwakọta nke mmanụ aṅụ na propolis bụ ọgwụ nwere àgwà pụrụ iche, ebe ọ bụ na ngwaahịa abụọ a bara uru ma site n'onwe ha na nchikota a.
Mkpụrụ akwụkwọ Propolis na mmanya: ntụziaka maka nkwadebe na iji
Ezigbo ezinụlọ, ma e wezụga mmanụ aṅụ a ma ama, na-eweta ọtụtụ ngwaahịa bara uru. Otu n'ime ha bụ propolis. Ihe a na-agwọ ọrịa bara uru ma na ụdị ya dị iche iche nakwa n'ụdị tinctures, nke ga-enyere aka wepụ ụdị ọrịa niile dị mfe. Banyere iji tincture propolis - kpoo nke ndị ọrụ na-arụ ọrụ, ọ na-eje ozi n'ozuzu oke aṅụ dịka ihe iji gbochie oghere na ekwo Ekwo ma ọ bụ dịka "mkpuchi" na mmanụ aṅụ.